Pirofeesar Bedassa Tadesse yaada furmaata dhiheesse! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPirofeesar Bedassa Tadesse yaada furmaata dhiheesse!
“Jijiiraramni jalqabamee ture suni Saba hundaa walitti fidee, dhugaa irratti hundaayee, waliigalteen itti fufuu qaba. Kuni otoo hinta’iin, akkaataan amma biyyi sun itti bulaa jirtu itti fufnaan, jaalattanis jibbittanis:
1. Nugusummaan Abiy abjuudhuma haadha isaa ta’ee hafa;
2. OPDOnis Itoophiyaanis ni badi, ni diigamti;
3. Itoophiyaan akka Chekslavakiya yookin akka USSR taatti;
4. Gaarummaa fi gadhumaa badii Itoophiyaa warra lubuun isaan hafee argu duwwaatu dhugaa bahuu danda’a bal’aa guddaan dhufuu waan dand’auuf.
1. Warri OPDo nuti yoo badne isinis ni BADU jechuu dhiisani dhaabbilee siyaasaa Oromoo hundaa wajjin hojechuu malu;
2. Warri ABOs garaa bala’atanii saba Oromoof jedhanii OPDO wajjin akkaataa itti hojettamu maluu qabu;
3. Dhaabileen siyaasaa warri biroonis eenyutu dafee OPDO ta’a jedhanii ariifachuu irra akamitti Saba keenya gargaaarra jedhanii yaaduu qabu;
4. Ijjoollee guddisa baddee erga guddatee booda dhibbaa dhibbatti qajeelchuun rakkisaa yoo ta’eyuu hamma ta’e geedaruun hinuma dandaama. Kanaafuu Oromoon hundi OPDO Oromummaa isheef hojechuu yaaltu ofitti qabuu qabu;
5. Seenaa adunyaa kana keessatti mootumaan waraanaan riphee lolaa balleesse hinjireef WBO balleessuun akka hindanda’amne hundinuu hubachuu qaba.”
Nagaan Jiraachuuf Malee Handhuurasaa #Walakkaa
Oromoon #Aangoof jedhe Qabsaa’e hin beeku takka!
Weellisaa Caalaa bultumee sirba Booleetii sirbe keessa kan fudhatamee.
dhaamsaa tanaa Yoo jaalatanii godhaa qaama dhimmii ilaalatuun gahaa.
#Abbaan qabeenyaa Oromoo jalatama fi kabajamaan Obbo#Dinquu_Dayyaasaa
Guyyaa har’aa akka jedhanittit Artistoota Oromoo 12f mana jireenyaa dhuunfaa baasii isaaniitiin ijaarsisuuf waadaa galanii jiru. Dabalataan immoo Artist jaalatamaa #Galaanaa gaaroomsaa dhaaf birrii miliyoona 1 kophaa isaatti badhaasee jira. Bayyee galatoomi ulfaadhu horii bulii umrii nuuf dheraadhu jedhan goota gafa xiiqii
OMN DAMEE Shashamanee